Ajuju Ajuju Ajuju WatercolorPNG
Gịnị kpatara WatercolorPNG?
N'ịbụ nke tọrọ ntọala na August 2016, WatercolorPNG bụ ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ na-ere nnukwute ihe eji emepụta ego na ọnụahịa. Anyị nwere ọtụtụ puku okooko osisi watercolor na ihe owuwu ndị ọzọ na-enye ndị na-emepụta ụwa. Anyị tọrọ ntọala na Ukraine ma anyị na-eje ozi n'ahịa zuru ụwa ọnụ.
Ebee ka m nwere ike ịhụ ngwaahịa m zụrụ?
Mbụ, banye na akaụntụ gị na saịtị anyị. Mgbe ahụ, gaa na Akaụntụ Akaụntụ m nke dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo gị. Ị nwere ike ịlele ngwaahịa gị / ịzụta n'ebe ahụ.
Ebee ka m nwere ike ịhụ njikọ njikọ m?
Naanị mgbe ị zụrụ, ị ga-enweta ozi-e na isiokwu ahụ "Ihe nbudata gị dị njikere". site na delivery@shopify.com. Njikọ a na-adịgide adịgide, n'ihi ya ị nwere ike iji ya mee ogologo oge ịchọrọ.
Kedu ụdị ụdị faịlụ ị na-enye?
Anyị na-enyefe PNG na JPG faịlụ dị iche iche. Ọ nwere ike ịbụ ihe dị iche iche ma ọ̄ bụ akụkụ nke usoro ahụ.
Enweghị m ike ibudata / chọta faịlụ m mgbe m na-akwụ ụgwọ maka nzụta m. Ị nwere ike ị nyere m aka?
Ozugbo ejiri akaụntụ gị mee ihe, ị ga-enwe ike ibudata ya ọtụtụ ugboro dị ka ịchọrọ naanị site na njikọ, nke ị ga-enweta na ozi nkwenye. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ịchọta ịzụrụ ihe gị, jide n'aka na ị pịnye mkpụrụokwu ziri ezi na ogwe ọchụchọ ahụ n'elu aka nri ma ọ bụ pịgharịa gaa na peeji nke ịkọ akụkọ ịzụta gị.
Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ site PayPal, enwere ike ịnwe oge site na PayPal na weebụsaịtị anyị iji nweta akara nke na-akwado ịzụta gị n'aka PayPal. Achọrọ akara a iji mata ịzụta gị ma nye gị ohere ibudata faịlụ ahụ. Ọ bụrụ na nke a emee, biko chere 15 nkeji tupu ị gbalịa ibudata ọzọ.
Gini mere o jiri ihe karịrị otu awa iji budata ùkwù m?
Nke a nwere ike mgbe ụfọdụ site na njikọ Ịntanetị dị nwayọọ na nbudata nnukwu. Ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ adịghị mma, biko nweta nseta ihuenyo gị ozi nhie (ma ọ bụrụ na ọ bụla) ma kpọtụrụ anyị maka enyemaka na maka njikọ ọzọ iji budata ngwugwu gị.
Kedu ka m ga - esi mee ka mwepu faịlụ gị?
A na-enye faịlụ faịlụ anyị niile na faịlụ ZIP iji chekwaa ohere ma debe ọtụtụ faịlụ ọnụ maka ịnweta ohere.
Ị nwere ike iwepu faịlụ site na ịgbaso usoro ndị a:
Maka Windows PC:
Iji wepu otu faịlụ ma ọ bụ folda:
Pịa okpukpu abụọ ka mepee ya.
Mgbe ahụ, dọrọ faịlụ ma ọ bụ folda ahụ site na folda mpịakọta na ebe ọhụrụ.
Iji wepu ọdịnaya nile nke nchekwa nchekwa ahụ:
Pịa "wepụ niile".
Mgbe ahụ soro ntuziaka ihuenyo.
Pịa faịlụ .zip ugboro abụọ, wee chọọ nchekwa ngwaahịa ma ọ bụ faịlụ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ịnweghị mmemme iji wepu faịlụ na kọmputa gị, anyị na-akwado itinye 7-Zip. ma ọ bụ WinZip.
Enwere m nsogbu itinye iwu.
O di nwute na anyi enweghi ike idebe iwu. Biko kpọtụrụ ọrụ ahịa https://watercolorpng.com/pages/contact-us ma anyị ga-arụ ọrụ iji dozie okwu a ngwa ngwa o kwere mee.
Kpọsaa mkpọsa maka imebi iwu.
Dị ka ihe ntanetị nwere ike iji rụọ ọrụ, anyị na-eme ka ị ghara imebi ihe gbasara ọdịnaya na-amasị gị na ị na-ewepụta oge iji kọọ akụkọ a na-enyo enyo. Iji mee mkpesa, biko kpọtụrụ anyị.
Kedu ka m ga-esi kpọtụrụ nkwado ndị ahịa?
Obi dị anyị ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla i nwere ike inwe. Biko kpọtụrụ ndị ọrụ ahịa na https://watercolorpng.com/pages/contact-us